Sawirro: Farmaajo oo xariga ka jaray dhisme ay iibsatay safaarada Somalia ee Washington | Xaysimo
Home War Sawirro: Farmaajo oo xariga ka jaray dhisme ay iibsatay safaarada Somalia ee...
Sawirro: Farmaajo oo xariga ka jaray dhisme ay iibsatay safaarada Somalia ee Washington
Waxaa furitaanka dhismaha, oo ku yaalla bartamaha Washington DC, xariga ka jaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ka yimid magaalada New York oo uu uga qeyb-galay shirkii golaha guud ee QM.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay munaasabadda furitaanka ayaa sheegay in ay ahmiyad weyn u leedahay Soomaaliya inay safaaradda ugu dambeyn degan tahay guri ay leedahay dowladda Soomaaliya, kadib tobaneeyo sano oo ay deganeyd dhisme kiro ah.
Madaxweynaha ayaa muujiyey dadaallada ay dowladdu ku bixineyso soo celinta qabkii iyo sharafkii dadka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen caalamka, haatanna la qorsheynayo si la mid ah tallaabadaan in dowladda ay u dhammeystiri doonto dhismaha iyo dayactirka Safaarado kale oo Soomaaliya ay ku leedahay dalal kale.
Waa markii ugu horreysay ee safaaradda Soomaaliya ee Washington ay degto dhisme ay Soomaaliya leedahay. Waxaa horey u jiray guriga safiirka.